किशोर नेपाल - Saptahik Magazine
किशोर नेपालका लेखहरु
‘म:म भन्नुस्, मोमो भन्नुस् वा म:मचा, सहरका बाल–वृद्ध, युवा–युवती र महिला–पुरुष– सबैको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने त म:म नै हो । ’
पुस १९, २०७६
घुम्न त जाऔं, तर कता जाने ?
अहिलेको भौतिक पूर्वाधार, खासगरेर हवाइ र सडक यातायात, को अपर्याप्त स्थितिले यो लक्ष्य पूरा हुन दिँदैन कि भन्ने आशंका छँदैछ । तोकिएको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन सक्यो भने त्यो सबै नेपालीका लागि सुखद हुने निश्चित छ ।
सुमनको चुटाइपछि खेलकुद
पुलिसले सुमनलाई लछार–पछार गर्दै चुटेपछि समारोहको रमाइलोमा मन खिस्रिक्क भयो । हात नचलाई कुरा गर्नै नचाहने हाम्रा पुलिस दाजुभाइको सामाजिक संस्कार नै कुटपिट हो कि आफूलाई मन नपर्नेबित्तिकै धुस्नु चुटान गर्नैपर्ने पेसागत प्रवृत्ति हो ? यो प्रश्नको जवाफ आउला भन्ने आशा छैन ।
सहरको नयाँ ठेगाना
रमाइलो बजार । पहिले कान्तिपुरको पूर्वी छेउमा पर्ने यो बजार अहिले व्यावसायिक समृद्धिको केन्द्र बनेको छ । बानेश्वर–बत्तीसपुतलीका रैथानेहरू यहाँबाट पलायन भइसकेका छन् । पुरानो समयको केही बाँकी छैन । सबै नयाँ छ र पनि मानिसलाई नयाँकै खोजी छ ।
पर्यटन वर्षको सँघारमा पोखरा
पर्यटनका लागि संसार प्रसिद्ध सहरमा पर्यटकहरूको आगमन निश्चय पनि राम्रो कुरा हो । तर, पोखराको पर्यावरणको सुरक्षाका लागि अलिकति पनि काम भएको छैन । फेवाको स्वरूप खुम्चिदैछ । जलकुम्भीको प्रकोप कुनै पनि बेला बढ्न सक्छ ।
अग्लियो कालापानी, खुम्चियो धरहरा
प्रम ओलीको धरहरा आरोहणको लगत्तै भुइँचालो नगएको भए धरहरा ढल्ने थिएन । त्यसका कथा र किंवदन्तीहरू लेख्न पाइने थिए भनेर चुकचुकाउनेहरूको ठूलै समूह छ । जतिसुकै ठूलो समूह भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग उनले धरहरा किन चढेका थिए ? सोध्ने कुरा भएन ।
माथिल्लो तामाकोसी: आशा र अपेक्षा
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र होइन, नेपाली जनताको पनि ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सफलतापछि यो आयोजना प्रारम्भ गरिएको थियो । यो नेपाली जनताको ड्रिम प्रोजेक्ट बन्नुको एउटै कारण थियो— लगानी ।
यो दुनियाँमा दु:ख पाउने म एक्लो होइन रहेछु : श्वेता खड्का
श्वेताका लागि माझी बस्तीमा संलग्नता एउटा असामान्य संयोग थियो समाजसेवाका लागि । रवीन्द्र खड्काको माझी बस्तीमाथिको एउटा लेख उनको उत्प्रेरणा बन्यो । त्यहाँ एउटा स्कुल बन्दै थियो । बस्ती थिएन । बिनाबस्तीको उजाड ठाउँमा किन चाहियो स्कुल ?
दसैंको घट्दो रौनक
हामीले हाम्रो तन्नेरी उमेरमा जसरी दसैं मनायौं, त्यसको परिकल्पना नै नगरौं अहिले । त्यो दन्त्यकथाजस्तो सुनिन्छ आजको सन्दर्भमा । हो, नवरात्रि त आज पनि मनाइन्छ । अहिले हामीले नौ दिन लगाएर गर्ने शक्तिपीठको दर्शन एकै दिनमा हुन्छ । उतिबेला गुह्येश्वरी, भुवनेश्वरी, नवदुर्गा, वनकाली, मंगला गौरी हुँदै भद्रकाली, संकटा, महांकाल, शोभा भगवती र इन्द्रायणीको दर्शन गरेर फर्कंदा बिहान बित्थ्यो ।
आश्विन १९, २०७६
सहरको छेउमा रहेर पनि सहर बन्न नसकेको, पहाडसँग जोडिएर पनि पहाड बन्न नसकेका यहाँका बस्तीहरूलाई ‘काँठ’ भनिन्थ्यो । सुन्दा कस्तो–कस्तो लागे पनि काँठ शब्द आफैंमा खराब होइन । आजका प्रसिद्ध कथा तथा उपन्यासकार नारायण ढकाल, राजव, इतिहासकार मोहन खनाल र अरु धेरै विशिष्ट नागरिकहरू काँठकै उपज हुन ।
आश्विन १६, २०७६
नयाँ नाम पाएका सहरहरूका पहाड फुटाउन जोडतोडले लागेका छन् जन–प्रतिनिधिहरू । जनतालाई पहाड होइन, मोटर चाहिएको छ, खेत खन्ने, भारी बोक्ने ट्याक्टर चाहिएको छ । गिट्टी, बालुवा बजारसम्म ओसार्ने टिपर चाहिएको छ । अब जनता गाउँले भएनन्, सहरिया भैसके । सहरिया भएपछि हुने–खाने भैखाका ठूलाठालूले मोटर चढ्लान् । नहुनेले बस चढ्लान् ।
अमर रहुन् विश्वेश्वर
बीपी कोइराला सशक्त र सबल राजनेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई जसरी निर्देशित गर्नुभयो, त्यो आफैमा अद्भूत छ । त्यसको चर्चा यहाँ गरी रहनु पनि पर्दैन । बीपी कोइरालाले बर्माको राजधानी रंगुनमा आयोजित समाजवादी सम्मेलनमा भाग लिनुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँले एसियाका तीनवटा समस्याको चर्चा गर्नुभएको थियो ।
अहिलेका लागि महानगरसँग जोडिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका पुग्नै मुस्किल छ । नगर प्रवेशमार्ग यति बिग्रिएको छ कि त्यसबाट पार पाउनु कठिन छ । चाबहिलदेखि बौद्ध हुँदै जोरपाटीको सीमा काटेर गोकर्णेश्वरमा छिर्नुस् अथवा गुह्येश्वरीबाट बाग्मती करिडोर समातेर गन्तव्यमा पुग्नुस् : सडकको गति उस्तै छ दुवैतिर ।
सहरको नाम टीकापुर
सामान्य मानिसका लागि टीकापुर सुदूरभन्दा पनि दुर्गम थियो । राजमार्गको बाटो, लम्की पुगेर, त्यहाँबाट जानु पर्थ्यो सहरसम्म । अहिले नेपालगन्जसँग टीकापुरको सोझो कनेक्सन छ । धम्बोजी चोकबाट खजुरा, गुलरिया र राजापुर हुँदै सजिलैसँग पुग्न सकिन्छ टीकापुर । टीकापुरमा अहिले सुदूर पश्चिमाञ्चलका धेरै जिल्लाका मानिस आएर बसोबास गरेका छन् । त्यो हिसाबले टीकापुर सांस्कृतिक विविधताको सहर बन्न पुगेको छ ।
सुत्न त कहाँ र मैले आफ्नी भाउजूलाई छोएको सम्म पनि थिइन । बरु एक दिन साइला काजीसँग भाउजू लहसिएको जस्तो लागेर, धर्म डिगाउलिन् भनेर दाइलाई चैतन्यसम्म दिएको हुँ । काजी साइलाले फसायो बाबु मलाई ।